Orinasa fampiroboroboana efijery horonan-tsary | Mpanamboatra sy mpamatsy horonantsary horonan-tsarimihetsika ao Shina
Rafitra fitiliana polyurethane
Ny fampahalalam-baovao dia ampahany lehibe amin'ny fitaovam-pitiliana. Rehefa mihozongozona ny tabilao mihetsiketsika, amin'ny alàlan'ny endrika samihafa sy ny habeny geometrika ary eo ambanin'ny hetsiky ny hery ivelany, dia hosarahina ny akora ary hahatratra ny tanjon'ny naoty. Ny karazana fananana ara-nofo rehetra, ny firafitra sy ny fitaovan'ny tontonana fisavana na ny fihenjanana ary ny masontsivana isan-karazany amin'ny milina fitiliana dia misy fiatraikany amin'ny fahaizan'ny efijery, ny fahombiazany, ny tahan'ny fihazakazahana sy ny fiainana. Dif ...
Product famaritana Polyurethane lamba lamba lamba tsara vita amin'ny polyurethane ravin miaraka amin'ny lamba avo lenta lamba. Polyurethane lamba lamba lamba tsara dia fanoherana ny abrasion ary fiainana maharitra ela kokoa noho ny volon-tsarimihetsika mihodina. Ankoatr'izay, ny fananan'ny anti-jamba dia ahafahana manangona fitaovana izay heverina ho sarotra na tsy azo atao ny maka sary azy eo aloha. Polyurethane fine screen harato dia manana fisokafana tena tsara izay tsara tahaka ny 0.075mm, izay mety amin'ny sakany ...
Rafitra fanaraha-maso fingotra